တိုက်ခန်း - orchid condominium Price in Myanmar | Myanmarkt Marketplace | Myanmarkt
တိုက်ခန်း classified: Orchid Condominium
Unicode ဖြင့်ဖတ်ရန် မဂ်လာပါခင်ဗျာ အလုံမြို့နယ်၊ Orchid Condominium တွင် ဈေးနှုန်းအတန်ဆုံးဖြင့်ရှာနေသော ကွန်ဒိုအရောင်းခန်းလေးကို မိတ်ဟောင်းမိတ်သစ် Customer များအတွက် ယူဆောင်လာပါပီ။ အလုံမြို့နယ်၊ အလုံလမ်းမကြီးပေါ်တွင် အဆင့်အတန်းမြင့်မားစွာ ခောတ်မှီ လှပသေသပ်မှုဖြင့် တည်ဆောက်ထားသော Orchid Condominium တွင် ဈေးနှုန်းအလွန်သင့်သော ကွန်ဒိုအခန်းအား အမြန် ရောင်းပါမည်။ >>> Sale Price ( 2500 Ls) ( Nego ) >>> 2050 sqft >>>3 Master Bedroom >>>5Aircon >>> Fully Furniture >>> Car Parking အထက်ဖော်ပြပါအရောင်းခန်းအပြင်လူကြီးမင်းများရွေးချယ်စရာအခြားစျေးနှုန်းသင့်အရောင်းခန်းလေးများလည်းအောက်တွင်တပါတည်ဖော်ပြထားပါသည်။ Orchid condo 1.(1760sqft)MBR 3, F.F Sale price-2850Ls 2.(1800sqft)MBR 3,F.F Sale price-2700Ls 3.(1850sqft)MBR 3,F.F Sale price-2650Ls 4.(1800sqft) MBR 3,F.F Sale price-3100Ls 5.(2050sqft) MBR 3,F.F Sale Price-3500Ls Facilities - >>> Swimming Pool >>> GYM >>> 24 Hour Security >>>4Lifts including Cargo - ဗဟိုအမျိုးသမီးဆေးရုံအနီး -Hot Pot City -အနီး -City Mart အနီး - ရွှေတိဂုံဘုရား - အာရှတော်ဝင်ဆေးရုံ - ဆာကူရာ ဆေးရုံး >>> အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက <<< 09 422888893 09 422888894, 09 422888892 09 447555584 ကိုလည်း ဆက်သွယ်စုံစမ်း မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်<<< ယခုကြော်ငြာများအပြင် အျခား ရောင်း/ငှါးရန် နေရာများလည်းရှိပါသဖြင့် ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ ယခုပဲ ဖုန်းလေးဆက်ပြီး လာကြည့်ပေးဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ လူကြီးမင်းတို့၏ ရောင်းရန်/ငှါးရန် အိမ်၊ခြံ၊မြေများကိုလည်း အမြန်ဆုံးရောင်း/ငှါးဖြစ်အောင် အကောင်းဆုံး ၀နဆှောငမှှု ပေးနေပါသည်။ ``တိက် မှန်ကန် မြန်ဆန်ဖို့ အောင်မြေစေတနာနဲ့ ဆက်သွယ်စို့ အောက်ဖော်ပြပါ Link တွင် အျခား အိမ်၊ခြံ၊မြေ၊ကွန်ဒို၊တိုက်ခန်း၊ စက်မှုဇုန်-ဂိုဒေါင်ကြော်ငြာများစွာကိုလည်း ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ Website link http://www.aungmyaysaytanarrealestate.com/ Facebook Page Aung Myay Saytanar RealestateCo.,Ltd ကျွနုပ်တို့ ကုမ္ပဏီ Face Book Page ကို Like & Share လုပ်ပေးဖို့ မမေ့နဲ့နော် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်